Ngwugwu njem nlegharị anya ụgbọ mmiri Dubai Underwater & Doow Cruise
Dubai Bollywood Hungamaeze 212022-05-23T17:14:34+05:30
Dubai Parks na ebe ntụrụndụ
Ịnweta ogige ntụrụndụ Bollywood na Dubai Parks & Resorts nwere nnyefe nloghachi na oche na ndabere onye nchịkwa.
Abịa Dubai - Oge na Ntụrụndụ:
Otu n'ime isi ihe nkiri nke ezumike Dubai gị, njem nri abalị bụ ụzọ kacha mma ị ga-esi nwee ọmarịcha vistas nke Deira na Bur Dubai n'ọgbara dị mma ma na-anabata. Ụgbọ mmiri Dubai Dhow nke ga-ewe awa abụọ nke na-amalitekarị mgbe anyanwụ dara na-ekpuchi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Dubai Creek dum. Ozugbo ị banyere n'ụgbọ mmiri anyị e weghachiri eweghachi nke ọma na Dubai Creek, a ga-enye gị ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, ozugbo njem njem ahụ malitere, ị nwere ike iri nri n'ụdị pụrụ iche nke gourmet a kwadebere nke ọma gụnyere efere Emirati mbụ jupụta na ọmarịcha. n'usoro nke desserts.
Burj Khalifa nke Dubai, nke kachasị ogologo n'ime ụlọ niile dị n'ụwa, toro ogologo na mpako n'etiti ụlọ elu ndị ọzọ nke obodo ahụ. Gaa leta ụlọ a mara mma ka ịmatakwu akụkọ banyere Dubai na akụkọ ihe owuwu ya. Biputere nke a, gaa na oche nche ụlọ nke 124th (N'elu) na igwe mbuli ngwa ngwa ka ị nwee nlele panoramic ogo 360 nke obodo Dubai dum. Ndị ọbịa nwekwara ike ịnụ ụtọ ihe ngosi isi iyi ịgba egwu kachasị n'ụwa nke na-arụ ọrụ n'etiti nkeji iri atọ ọ bụla n'ala ala ụlọ ahịa Dubai Bulie na dobe ga-anọ na ụgbọ ala na-ekerịta.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Onye ọkwọ ụgbọ ala ga-akpọrọ gị gaa na Dubai Park na Resorts. Ebe ogige isiokwu agwakọta nke Middle East kasị ukwuu, na-egosipụta Motiongate ™ Dubai, Bollywood Parks ™ Dubai, Legoland® Dubai na Legoland® Water Park, ha niile nọ n'otu ebe dị egwu! Nwee obi ụtọ ụbọchị zuru oke nke ihe ọchị na-enweghị ngwụcha yana ihe karịrị 100 njem na-akpali akpali, ịgbagharị ịgbagharị na-agbaji, ihe nkiri enyi na enyi ezinụlọ na ihe ngosi ndụ na-adọrọ adọrọ! A ga-edobe gị akwụkwọ maka tiketi ogige 1 Day 1 ebe ị ga-enwe nhọrọ ileta wee họrọ ogige 1 ọ bụla n'ime otu ụbọchị.
BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai bụ ogige izizi ụdị ya n'ụwa. Na mpaghara isii na-adọrọ adọrọ, ị nwere ike ịnweta gburugburu dị iche iche sitere n'ike mmụọ nsọ Bollywood blockbusters kasịnụ.
Ịbuta site na ogige ntụrụndụ na ịpụ na nkwari akụ ga-adabere na nkesa.
Ịkekọrịta Otu $ 547
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 405
Agba okenye ọzọ $ 420
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ $ 318
Nkata ụmụaka na akwa ọzọ $ 412
Aha ụlọ nkwari akụ: Fortune Grand Hotel Deira ma ọ bụ ihe yiri ya